Bungalows Iibka iyo Ijaarka gudaha Leicester, Leicestershire
Bungalows gudaha Leicester
Bungalows gudaha Leicestershire
1 - 10 ee 281 Liisaska
Waxa daabacay Seths Estate Agents
Waxa daabacay Spencers Countrywide - Birstall
Waxa daabacay Newton Fallowell - Leicester Forest East
Waxa daabacay William H Brown - Leicester
Waxa daabacay Kings Real Estate
Waxa daabacay Express Properties
Waxa daabacay Whitegates - Broughton Astley
Leicester ((dhagayso) LEST-ər) waa degmo iyo awood maamul goboleed ku taal Bariga Midlands ee England, iyo magaalada gobolka ee Leicestershire. Magaalada waxay ku taalaa Webi-wabiga oo u dhow dhammaadka bari ee the National Forest. Waa dhanka waqooyi-bari ee Birmingham iyo Coventry, koonfurta Nottingham, iyo galbeedka Peterborough. Qiyaasta sanadka dhexe ee 2016 ee dadka ku dhaqan Magaalada Leicester ee awooda ugu hooseysa waxey aheyd 348,300, waa koror ku dhawaad ​​18,500 (5.6%) tirada guud ee tirakoobka 2011 oo ah 329,839, taasoo ka dhigeysa degmada ugu dadka badan gobolka East Midlands. Deegaanka iskuxiran ayaa sidoo kale ah kii 11-aad ee ugu dadka badnaa Ingiriiska iyo kan 13-aad ee ugu dadka badan Boqortooyada Ingiriiska.Leicester waa isgoyska labada wado ee waaweyn ee tareenka - waqooyi-koonfur Midland Main Line iyo bariga / galbeedka Birmingham ilaa London Stansted CrossCountry saf; iyo sidoo kale isku xirnaanta wadooyinka M1 / ​​M69 iyo jidadka jirridda A6 / A46. Leicester waa hoyga naadiga kubada cagta Leicester City iyo naadiga rugby Leicester Tigers.